Waxaad ka qayb Review Open ee Inyar by Inyar: Research Social ee Age Digital ah. Inta lagu guda jiro Review Open waxaad ka akhrisan kartaa buugga oo caawin u wanaajiyo. Waxaad ku siin karaan talooyin by qoritaan gaaban samaynaysaa isticmaalaya hypothes.is , nidaam il annotation furan. Dheeraad ah, website-ka qaadan doona celintaada awaamiir ay raad heerka qornaa oo baxsi ah qayb kasta oo buugga ah.
Review Open ka dhici doona halka publisher kitaabkan ee, Princeton University Press, ayaa sameynaya dib u eegis asaaga. -celin ka Review Open iyo dib u eegis faca waxaa loo isticmaali doonaa si ay u abuuraan qoraal gacmeedka ah oo dib loo eegay. Muddada Review Open dhammaan doontaa marka qoraaladii ugu dambeeya waxaa loo gudbinayaa Princeton University Press, kaas oo noqon doona in November 2016.
FAQ oo ku saabsan dib u eegidda furan
Waa maxay nooca-celin aad doonaysaan?
Review Open ma ahan oo kaliya oo ku saabsan qaadaan typos. Saas ma aha, Review Open waxaa loogu talagalay si ay u ururiyaan dhammaan noocyada-celin, oo waxaan si gaar ah u soo dhaweyn lahaa jawaab-celin kasta oo aad ka qabto maalkii kitaabka. Ma jiraan qaybaha in aad ka heli gaar ahaan wareer? Ma dhibcood ay si aad si gaar ah muhiim u tahay? Miyaan samaynta sheegaya in aad u malaynayso in loo baahan yahay in la safeeyey? Ma jiraan qaybo ka mid ah buugga in aad u malaynayso in ay tahay in laga saaro? Marka shaki, waxaan qabaa waa in aad raacdo mid ka mid ah mabaadiida ugu weyn ee Wikipedia: geesi Noqo .
Ma arki karaa qoritaan gaaban ah in dadka kale ayaa?
Haa, qoritaan gaaban dhan yihiin dadweynaha. Waxaad iyaga ku arki kartaa dhinaca gacanta midig oo ka mid ah bog kasta ama waxaad ka akhrisan kartaa in foomka durdur .
Maxay yihiin faa'iidooyinka ee akhristayaasha?
Waxaad ka heli in ay akhriyaan qoraal gacmeedka ah oo caawin u wanaajiyo.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ee qorayaasha iyo daabacayaasha?
The habka Review Open ka faa'iideysan doona qorayaasha iyo daabacayaasha labada, xataa haddii ay aad u daneyneyso in kordhinta helitaanka aqoon. Geedi socodka waxay keeni doontaa in tayada qoraal gacmeedka sare iyada oo feedback toos ah iyo awaamiir. Dheeraad ah, geeddi-socodka Review Open siin doonaa xog qiimo leh oo loo isticmaali karo inta lagu jiro suuq in kitaabka.
Waa maxay habka dhiso website this ah?
Waxaan samayn doonaa post a blog buuxa oo ku saabsan in mustaqbalka. Waayo, hadda, aad kartaa badan oo ku saabsan noo code akhriyo .
Midkiinna abid wax sidan oo kale sameeyo ka hor?
Hubi in ay leeyihiin Waxaan ahay. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah mashaariicda xoogaa la mid ah oo aan maqlay oo ku saabsan:
Hadley Wickham u muuqataa in ay yeeshaan qaar ka mid ah buugaagta uu si buuxda u furan, inkastoo aan waligay ma arag isaga qoro wax ku saabsan.
Lawrence Lessig ee Code 2.0 waxaa lagu qoray qayb on Leaks ah.
Mid ka mid ah buug dhab ahaantii i waxyoonay this isku day waa buug Michael Nielsen ayaa ikhtiraacida Discovery . Oo, waxa ay u muuqataa in uu gelinaya uu buugga cusub ee waxbarasho qoto dheer habka la mid ah.
Kathleen Fitzpatrick sameeyey wax la mid ah iyada buug Qorshaysan duugaas: Publishing, Technology, oo Mustaqbalka ee Academy ah .
Haddii ay jiraan mashaariic kale ee la xiriira in aan seegay, fadlan noo sheeg oo waxaan ku dari doonaa link. Cinwaanka email waa info@bitbybitbook.com .
Waa maxay nooca macluumaadka aad soo ururinta iyo sida macluumaadka loo isticmaali doonaa?
Fadlan akhri our gaarka ah iyo siyaasadda oggolaanshaha .
Sidee baan u badan oo ku saabsan dib u eegidda faca dhaqanka ee buugaagta tacliinta u ogaan karaa?
AAUP ayaa dhawaan la daabacay warbixin ku saabsan hab-dhaqannada ugu wanaagsan ee dib u eegista asaaga .
waxan aan idinku samayn karaa iyada oo aan kitaabkayga?
Sure. Fiiri ah qaybta code of this website for badan oo ku saabsan sida aan u sameeyey.
Waxaan su'aal ka duwan oo ku saabsan Review Open. Sidee baan ku heli karaa taabashada?
U dir email si info@bitbybitbook.com .